08/07/12 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Tuesday, August 07, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာလေ့ လာမှုအရ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၂ နိုင်ငံအား စစ်တမ်း ကောက်ယူ ခဲ့ရာတွင် ဗြိတိန်၊ ဆော်ဒီအာ ရေးဗီးယား၊ UAE နှင့် တောင်အာဖ ရိကနိုင် ငံသား များသည် ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အပျင်းရိ ဆုံးအဖြစ် တွေ့ရသည်။ Lancet Journal ၏လေ့လာ တွေ့ရှိချက် ဖော်ပြ မှုအရ ဗြိတိန် နိုင်ငံသည် အပျင်းရိ ဆုံးစာ ရင်းတွင် ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံ လူဦး ရေ၏ ၆၃.၃ ရာခိုင် နှုန်းမှာလှုပ်ရှား မှုမရှိသူများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဂရိနိုင် ငံသည် ပူနွေး သောမြေထဲ ပင်လယ် နိုင်ငံတစ်ခု ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်အစီ ရင်ခံစာ များအရ ကျန်းမာရေး နှင့်အညီ ညွတ်ဆုံး အစား အစာများ ကို စားသုံး သည့်နိုင်ငံ ဖြစ်၍ ပျင်းရိမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ လှုပ်ရှား မှုမရှိ သူမှာ တစ်နိုင်ငံ လုံးလူဦးရေ၏ ၁၅ ရာ ခိုင်နှုန်း ခန့်သာ ရှိသည်။
ဆော်ဒီအာ ရေးဗီး ယားနှင့် UAE နိုင်ငံများရှိ အမျိုး သမီးများသည် လူမှုရေး ကန့်သတ် ချက်များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရပြီး အမျိုးသား များထက် အမျိုးသ မီးများမှာ လှုပ်ရှား မှုနည်း သူများဖြစ်သည်။ ဆော်ဒီအာ ရေးဗီးယား နိုင်ငံသည် တတိယ အပျင်းရိ ဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှား မှုမရှိသူ ၆၈.၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ တောင်အာဖရိ ကနိုင်ငံ သည် လှုပ်ရှားမှု မရှိသူ ၅၂.၄ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ ဘူတန် နိုင်ငံသည် လှုပ်ရှား မှုမရှိသူ ၅၂.၃ ရာခိုင် နှုန်းရှိပြီး အပျင်းဆုံး နိုင်ငံ ၂ဝ တွင် ပါဝင်သည်။ သုတေသန ပြုချက် များအရ ကမ္ဘာ့လူဦး ရေ၏သုံး ပုံတစ်ပုံ ခန့်သည် အနည်း ငယ်မျှသော ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား မှုကိုပင် မတွေ့ ရကြောင်း၊ လေ့ကျင့် ခန်းပြုလုပ် မှုနည်းခြင်းသည် ကျန်းမာရေး ချူချာမှုနှင့် သေဆုံးမှု ကို ပိုမိုတွန်း အားပေးလျက် ရှိကြောင်း၊ လူတစ်ဦးသည် တစ်ပတ်လျှင် ၂.၅ နာရီခန့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်း ဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
အီရန်နိုင်ငံ ၏စစ်ရေးကြီး ထွားလာမှုကို ဗြိတိန်မှ စိုးရိမ်လာခြင်း
အီရန်နိုင်ငံ ၏တာတို ပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးအား ထပ်မံမွမ်းမံ ၍အောင်မြင် စွာစမ်းသပ် မှုပြုလုပ်ပြီး နောက် ဗြိတိန် နိုင်ငံအ နေဖြင့် အီရန်နိုင်ငံ ၏စစ်ရေး ကြီးထွား လာမှုကို စိုးရိမ်ပူ ပန်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အီရန်နိုင်ငံသည် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းလုပ် စတုတ္ထမျိုး ဆက်သစ် Fateh 110 တိကျသည့် ပဲ့ထိန်းဒုံးအား အောင်မြင် စွာစမ်းသပ် ပစ်ခတ် နိုင်ခဲ့သည်။ အီရန်နိုင်ငံ ၏စစ်ရေး စွမ်းရည်တိုး မြှင့်မှုတစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအ ဖြစ်အီရန် ကျွမ်းကျင်ပ ညာရှင် များက အကွာအ ဝေးကီလိုမီတာ ၃ဝဝ ပစ်ခတ် နိုင်သည့် နောက်ဆုံးပေါ် Surface to Surface Missile ကိုတည်ဆောက် ထုတ်လုပ်နိုင် ခဲ့သည်။ ၄င်းဒုံး ကျည်အား ကာကွယ် ရေးဝန် ကြီးဌာန ဒုံးကျည် တည်ဆောက် မှု စက်မှုနည်း ပညာအ စီအစဉ်မှ အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး Ahmad Vahid က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆိုမာလီယာ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Bosaso မြို့အနီး Galgala တောင်တန်း အနီး၌ အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် တစ်စီးပျက်ကျ ခဲ့ကြောင်း Press TV သတင်း ဌာနမှ ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် သည် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပျက်ကျ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုမာလီယာ အဆင့်မြင့် အရာရှိတစ် ဦးဖြစ်သူ Sheikh Muhammad Talal Daahir က Press TV သတင်း ဌာနသို့ ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် ပျက်ကျပြီးနောက် အခြားမောင်း သူမဲ့လေယာဉ် တစ်စီးသည် ဒုံးပျံအချို့ ဖြင့်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဒေသတွင်းရှိ အယ်လ်ရှာ ဘတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးသေ ဆုံးခဲ့ကြောင်း Daahir က ဆက်လက် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသည် ဆိုမာလီ ယာနိုင်ငံ၌ Kamikaze အမည်ရှိ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် သစ်တစ် မျိုးအား အသုံးပြု လျက်ရှိပြီး ၄င်းလေယာဉ် များ၌ ဒုံးပျံများ တပ်ဆင်ထားကာ ထောက်လှမ်းရေးနှင့် ကင်းထောက် လေယာဉ်များ အဖြစ် အသုံးပြု လျက်ရှိပါသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံသည် ပါကစ္စတန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ယီမင်နှင့် ဆိုမာလီယာ နိုင်ငံတို့ ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများ၌ လျှို့ဝှက် စစ်ဆင်မှု များတွင် မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ် များအား တိုးမြှင့် အသုံးပြု လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ စစ်သွေး ကြများကိုသာ လေကြောင်းမှ အဓိကထား တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံမှ အခိုင်အမာ ပြောကြား လျက်ရှိသော်လည်း အရပ်သား များသည် ထိုသို့ လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်မှု၏ အဓိက သားကောင်များ အဖြစ်ရောက်ရှိ လျက်ရှိကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းအရင်း အမြစ်များမှ ပြောကြား လျက်ရှိပါသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံအနေဖြင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံ များတွင် မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်များ ကိုအသုံးပြုလျက် ရှိကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူမည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
Posted by drmyochit Tuesday, August 07, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
From - TheVoiceWeekly
အဆိုပါ ကော်မတီ၏ အဓိကတာဝန်မှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တရားရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၊ မီဒီ ယာများကြား တရားဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးနေထိုင်မှု ရှိမရှိကို ကြပ်မတ် ထိန်းကျောင်း ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု အဆင့် အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယနေ့ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့တွင် ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူမည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ တစ်ရပ်ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရေးရာ ကော်မတီတွင် ပါဝင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှာ
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးမန်းမောင်မောင်ဥာဏ် ပန်းတနော် မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးမင်းဆွေ၊ ဒိုက်ဦးမဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဒေါ်ဒွဲဘူ၊ အင်န်ဂျန်းယန် မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးစိုင်းထွန်းစိန် မိုင်းပြင်း မဲဆန္ဒနယ်၊အဖွဲ့ဝင်
(၆) ဒေါက်တာရိုအုပ် မတူပီ၊ မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၇) ဦးခင်မောင်မြင့် ဇီးကုန်းမဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၈) ဒေါ်မိယဉ်ချမ်း၊ ကျိုက်မရော မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၉) ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေ၊ တာမွေ၊ မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ဦးစိုးရယ်၊ ဒီမောဆို၊ မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ဒေါ်ခင်စောဝေ၊ ရသေ့တောင် မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ဦးနယ်လ်ဆင် (ခ) ဦးဆောင်ဆီ ၊ ကျောက်မဲ မဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ဦးသိန်းညွန့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်၊ အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမဲဆန္ဒနယ် အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) ဦးဝင်းမြင့်၊ ပုသိမ်မဲဆန္ဒနယ်၊ အတွင်းရေးမှူး
ယနေ့ ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၂၁ ရက်မြောက်နေ့တွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကော်မတီ တရပ်ကို ဖွဲ့စည်းရန် အစီစဉ်ရှိကြော သိရသည်။ ယင်းကော်မတီတွင် ဒီချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်မှ ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန် ယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။
မနေ့က CNN သတင်း ဌာနက ထုတ်လွှင့်တဲ့ Samuel Burke ရဲ့ သတင်း ဆောင်း ပါးလေး မြင်ရ ကြည့်ရတော့ ရင် ထဲ မချိအောင် ခံစား ရ တယ်။ အာ ဖဂ န် ကျေး လက် တခုမှာ အသက် ၁၁ သမီးအရွယ် မိန်းကလေးငယ်နဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ် အမျိုး သားတို့ မင်္ဂလာ ပွဲ အကြောင်းပါ။အဲဒီ မိန်းကလေး ငယ်လေးက ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ သူကို ပြောပြာတာ မှာတော့ သူ က ကျောင်းဆရာမဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်း ထားတာ ကြောင့် အခု လို စေ့စပ်လိုက် တာကို ၀မ်းနည်း တယ် တဲ့။
မိန်းကလေးငယ်လေးက လက်ထပ်ဖို့ ထွက်မလာခင်မှာ သူတို့ အာဖဂန် ဒေသ စကားဖြစ်တဲ့ ဒါရီ ဘာသာစကား အတန်း မှာ တက်ရောက်သင်ကြားနေတာပါတဲ့။
တကယ်တော့ အဲဒီ မိန်းကလေးဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ရှိတဲ့ ၅၁ သန်းကျော်တဲ့ ကလေး သတို့သမီးတွေထဲ က တဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဖြစ်တာ မွတ်ဆလင်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
ကမ္ဘာတလွှား ဒေသတော်တော်များများက ယဉ်ကျေးမှု တော်တော်များများမှာ ဒီလိုပဲ ကလေးငယ် သတို့ သမီးနဲ့ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ကြတာရှိတယ်လို့ သတင်းဆောင်းပါးရေးသူက ဆိုပါတယ်။
ဓာတ်ပုံပညာရှင် Stephanie Sinclair က အခုနက အာဖဂန်က စုံတွဲလို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာတလွှား ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက် နေတာပါ။
သူ့ဓာတ်ပုံတွေကို “အဖြေမရှိတဲ့ ပုစ္ဆာများ” လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်က လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို အခုလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လက်ထပ် ထိမ်း မြား ရတာကို မေးခဲ့သလို အခြားသူတွေကိုလည်း မေးခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုမှ မငြင်းသာပါဘူးတဲ့။ ဒီလို မြက်နုကြိုက် တဲ့ အာဖဂန် အမျိုးသားတွေ ကိစ္စက ထုံးစံ တခုလိုပါပဲတဲ့။ အပျိုကြီးဖားဖား ဖြစ်အောင်တောင် ထိုမောင်တွေက မ စောင့် ကြတာပါတဲ့။
“ကျမ သူ့ကို မြင်တိုင်း ပုန်းခဲ့တယ်။ သူ့ကို မကြည့်ချင်လောက်အောင် မုန်းတယ်” လို့ Tehani ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး က ပြန် ပြောင်း ပြောပြတယ်။ Tehani လက်ထပ်တုန်းက သူ့ အသက်က ၆ နှစ်၊ ခင်ပွန်းသည် Majed ရဲ့ အသက်က ၂၅ နှစ် ပါတဲ့။ သူက တကယ်တော့ ယီမင်နိုင်ငံက တောင်တန်းဒေသက မိန်းကလေးပါ။
သူ့ ညီအမတော်စပ်တဲ့ Ghada ကလည်း ကလေး သတို့သမီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေ လည်း ပြန်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလို ကလေးသတို့ သမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကလဲယားက အီသီယိုပီးယား၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ နီပေါလ် စတဲ့ ဒေသ တွေကိုလည်း သွားပြီးမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။
တချို့ အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တ ယောက် ဆိုရင် လက်မထပ်ရသေးပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်
ဖြစ်နေ တာ၊ တချို့ လက်ထပ်ရမှာ ကြောက်လို့ ထွက်ပြေးကြရတာတွေလည်း သူက ပြန်ပြီးဖောက်သည်ချ ထားပါတယ်။
ယီမင်နိုင်ငံက Nujood Ali ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဆိုရင် အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာ ခင်ပွန်သည်နဲ့ ကွားရှင်းခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် သူ့ အသက်က ၁၂ ပဲ ရှိသေးတဲ့ အကြောင်းတွေ စုံစုံလင်လင် သူက မှတ်တမ်းတင် ရေးသား ထားပါတယ်။
အခုလို အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးအရွယ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားနေတဲ့ ကမ္ဘာတလွှားက ဖြစ်ရပ်ကိုတော့ သူက အဖြေ မရှိသေးဘူးလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။
အန္တရာယ်များတဲ့ ဒီ ဓလေ့ကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲ ယူရလိမ့်မလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကမ္ဘာကြီး က စောင့်နေရမှာလဲ တဲ့။
မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါသော မြန်မာအပေါ် ရိုဟင်ဂျာကို ခုတုံးလုပ်လေသလား
Posted by drmyochit Tuesday, August 07, 2012, under သတင်းများ | No comments
From -မောင်ကိုသက် facebook
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား၏ ပေါ်လစီအသစ်သည် အာရှပစိဖိတ် စိုးမိုး ရေးဖြစ် သည်။ အာရှပစီဖိတ် စိုးမိုးရေး အတွက် အမေရိကန် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအရ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ရန်လိုလာသည်။ သို့အတွက် မဟာ မိတ်နိုင်စာချုပ်နိုင်ငံများ ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ငြားလည်း စစ်အေးခေတ် ကာလအ တွင်းနှင့် စစ်အေးခေတ် လွန်ဆယ်စုနှစ် အတွင်းတွင်အမေရိကန်သည် အာရှ-ပစိဖိတ် ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့။ သူ့အတွက် မမျှော်လင့်ဘဲ လက်သီးချက်ပြင်းပြင်း မိသွားခဲ့သည်။ ထိုလက်သီးချက်မှာ 9/11 အရေး အခင်းဖြစ်လေသည်။ ထို့ကြောင့် War on Terror ဟုကြေငြာကာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖဂန်သို့ အာရုံလှည့်သွားခဲ့သည်။ ထိုဆယ်စုနှစ် နှစ်စုနီးပါး အတွင်းတွင် တိန့်ရှောင် ပင်၏ ပေါ်လစီနှင့်အတူ နိုးထလာခဲ့သော တရုတ် နဂါးကြီးက တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွား လာခဲ့ပေသည်။
အိန္ဒိယနှင့် Strategic Partnership ကို ထူထောင်ထားနိုင်သော်လည်း အာရှပစိဖိတ်စိုးမိုးရေးအတွက် အဓိက ကျသော နေရာဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို အမေရိကန် ဝင်မစွက်နိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ထိုအတွက် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား တက်လာချိန်တွင် မဟာဗျူဟာမြောက် မျဉ်းကြောင်းဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ တို့အတွက် နိုင်ငံရေးအရ ချဉ်းကပ်မှု ပြောင်းလဲ ရန်ကြိုးစားလာပါသည်။ တရုတ်အပေါ် ကြွေးမှီတင်မှု များပြားနေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်တို့ရန်မှ တွန်းလှန်ရန် တရုတ်ကို စစ်ရေး၊ စီးပွားရေးအရများစွာ မှီခိုအားထားနေရသည်။ ထိုကိစ္စကို အမေရိကန်က မနှစ်မြို့လှချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမေရိကန် ရေတပ် ကျက်စားလျှင် များစွာ စစ်ရေးအရ အသာစီးရနိုင်သည့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကို စိုးမိုးရန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာတို့နှင့် ပိုမို နီးကပ်ထိစပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိမှ သာဖြစ်လာနိုင်ပေမည်။ထိုအချိန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် ဘာသာရေးအစွန်းမေ၇ာက်သော ရှိတ်ဟာစီနာ၏ အစိုးရအဖွဲ့တက်လာသည်။ ထိုအချက်သည် အမေရိကန်အတွက် လမ်းစများကို ပွင့်သွားစေသည်။ သို့၇ာတွင် လိပ်ခဲတည်းလဲ ဖြစ်နေသော ကိစ္စရပ်မှာကား မြန်မာ၏ ခေါင်းမာသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များပင်တည်း။
မာလီနိုင်ငံအတွင်း အာဖရိကတပ်ဖွဲ့များ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှထောက်ခံခြင်း
မာလီနိုင်ငံ အတွင်းရှိ အစ္စလာမ်စစ် သွေးကြွသောင်း ကျန်းသူများကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြိုခွင်းနိုင်ရန် အာဖရိက တပ်ဖွဲ့များ၏ ကြားဝင် ဆောင်ရွက်မှုကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ထောက်ခံကြောင်းနှင့် ပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့ များကိုမူ စေလွှတ်သွား မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြင်သစ်ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး Jean-Yves Le Drian က သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အာဖရိက တပ်ဖွဲ့များ၏ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်မှုသည် ရှောင်လွှဲ၍ မရသော လိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း Le Drian က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အာဖရိက တပ်ဖွဲ့များသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မူ ဘောင်အတွင်းမှ မာလီနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအရေး ယူဆောင်ရွက် မှုကို လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြင်သစ် နိုင်ငံမှ မျှော်လင့်ကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အစ္စလာမ်အစွန်း ရောက်အုပ်စု များ၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်သို့ ၅ လနီးပါးရောက် ရှိနေခဲ့သော မာလီတောင်ပိုင်း ဒေသတွင်း အခြေအနေ နှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မိ ကြောင်းလည်း ၄င်းက ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် မာလီနိုင်ငံသို့ တပ်ဖွဲ့များ စေလွှတ်မည် မဟုတ်သော် လည်း မာလီ နိုင်ငံတွင် အာဖရိက တပ်အင်အား အသုံးပြုမှုအား နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း ထံမှ သဘောတူညီမှု ရရှိရေးအတွက် အနောက် အာဖရိကနိုင်ငံ များအားကူညီမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး Laurent Fabius က ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မာလီနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်မတ် လအတွင်းက စစ်အာဏာ သိမ်းမှုဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် လွတ်လပ်သော ကိုယ်ပိုင်နယ် မြေထူထောင်ရန် ကြိုးစား လျက်ရှိသည့် အစွန်းရောက် အစ္စလာမ္မစ် အုပ်စုများနှင့် Tuareg သူပုန်တပ်ဖွဲ့ များသည် မငြိမ်သက် မှုများကို အခွင့်ကောင်း ယူ၍ နိုင်ငံ၏ မြောက်ပိုင်းကို ထိန်းချုပ်ခဲ့သဖြင့် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ တစ်နိုင် ငံအဖြစ် ဆက်လက်ရပ် တည်နိုင်ရန် အတွက် ရုန်းကန်ရ လျက်ရှိပါသည်။ မာလီတောင်ပိုင်း တွင်ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ များကြောင့် ပြည်သူ ၂၆ဝ,ဝဝဝ ကျော်မှာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ ရကြောင်း ကုလသ မဂ္ဂဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ရုံး၏ထုတ်ပြန် ချက်အရ သိရှိရပါသည်။
ဆီးရီးယား နိုင်ငံ၌ ပြန်ပေးဆွဲခံ ထားရသည့် အီရန် ဘုရားဖူးများ ပြန်လည်လွတ် မြောက်ရေးအတွက် အကူအညီပေးရန် တူရကီနိုင်ငံနှင့် ကာတာနိုင်ငံ များအား အီရန်နိုင်ငံမှ တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း
ဆီးရီးယား နိုင်ငံ၌ ပြန်ပေးဆွဲ ခံထားရသည့် အီရန် ဘုရားဖူးများပြန် လည်လွတ်မြောက်ရေးတွင် အကူအညီ ပေးရန် တူရကီ နိုင်ငံနှင့် ကာတာ နိုင်ငံတို့သို့ အီရန်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး Ali Akbar Salehi က တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ဒေသမီဒီ ယာတစ်ခုမှ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့ တွင်ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။ အီရန်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး Ali Akbar Salehi သည် တူရကီနိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး Ahmet Davutoglu နှင့် ကာတာနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani တို့အား သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် တယ်လီဖုန်း ဖြင့်ဆက်သွယ် ဆွေးနွေး၍ ပြန်ပေးဆွဲခံထားရသော အီရန် ဘုရားဖူးများ လွတ်မြောက် ရေးအတွက် အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ အစောပိုင်းတွင် ဒမတ်စကတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ Hazart Zainab ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းသို့ ဘတ်စ်ကား တစ်စီးဖြင့် သွားရောက် လျက်ရှိသော အီရန် ဘုရားဖူး ၄၈ ဦးအား လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် သမားများက ပြန်ပေးဆွဲ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆီးရီးယား နိုင်ငံရှိ အီရန်ကောင် စစ်ဝန်ရုံးက ပြန်ပေး ဆွဲခံရသော အီရန်နိုင်ငံသား လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဆီးရီးယား လုံခြုံရေးတပ် ဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ယခု ပြန်ပေးဆွဲ ခံရခြင်းသည် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်မဟုတ်ဘဲ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း၌လည်း ဒမတ်စကတ် မြို့နှင့် အနောက်မြောက်ပိုင်း Aleppo မြို့သို့ သွားရောက် သည့်လမ်းတွင် အီရန်ဘုရားဖူး ၁၁ ဦးအား လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် သမားများမှ ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ဖူး ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ကလည်း Homs မြို့တွင် အင်ဂျင်နီယာ ၅ ဦးအား လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် သမားများမှ ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အင်ဂျင်နီယာ များမှာ အီရန်နည်း ပညာအကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်နေသော Jandar စွမ်းအင်စက်ရုံ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့များက မြို့တော် ဒမတ်စကတ်အား အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုခြင်း
ဆီးရီးယား သမ္မတ ဘက်ရ်ှဟာ အယ်လ်အာ ဆတ်အပေါ် သစ္စာခံ သည့်တပ်ဖွဲ့ များသည် မြို့တော် ဒမတ်စ ကတ်ရှိ အတိုက် အခံများ၏ အမာခံနယ် မြေအားလုံးကို ပြန်လည်သိမ်း ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆီးရီးယား စစ်ဘက် အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဒမတ်စကက် မြို့လယ်ခေါင် အနီးရှိ အတိုက်အခံ တပ်ဖွဲ့များအား ဆီးရီးယား စစ်ဘက်က သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် တင့်ကားများ ကိုအသုံးပြု တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသည်။ ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ တပ်ဖွဲ့များသည် မြို့တော်ရှိ နေရာအနှံ့ အပြားအား ဇူလိုင်လ လယ်ပိုင်းမှစ၍ ထိုးစစ်ဆင်မှု အရှိန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြို့တော် ဒမတ် စကက်ရှိ အတိုက်အခံ တို့၏နေရာ အားလုံးကို ဆီးရီးယား တပ်ဖွဲ့များက သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင် ခဲ့ကြောင်း စစ်ဘက်ခေါင်း ဆောင်တစ်ဦးက မီဒီယာ များသို့ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဆီးရီးယား အစိုးရတပ်ဖွဲ့ များသည် မြောက်ပိုင်း Aleppo မြို့၌လည်း ၄င်းတို့၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုအား အရှိန် မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့နှင့် ၄ ရက်နေ့တို့တွင် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ အရပ်သားများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း လူ ၂ဝ ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဗြိတိန်အခြေ စိုက်လူ့အခွင့် အရေးလေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ ဝင်များသည် ဆင်ခြင်မှု ကင်းမဲ့စွာဖြင့် လူနေရပ်ကွက် များပေါ်သို့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း အတိုက်အခံ တက်ကြလှုပ် ရှားသူတစ်ဦးက ရုပ်သံ သတင်း ဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက တောင်ကိုရီးယား-အမေရိကန် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း
တောင်ကိုရီးယား နှင့်အမေရိ ကန်နိုင်ငံတို့က သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြု လုပ်ရန် စီစဉ် ထားသောUlji Freedom Guardian ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ ကျင့်ခန်းအား သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြောက် ကိုရီး ယားနိုင်ငံ ပြစ်တင်ရှုတ် ချခဲ့ကြောင်း နှင့်နူကလီးယား စစ်ပွဲတစ် ရပ်အားဟန့်တား နိုင်ရေး အတွက်ကြို တင်ပြင် ဆင်ထား ရန်တောင်း ဆိုခဲ့ကြောင်း Newsnow သတင်းတစ် ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ ကျင့်ခန်းသည် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံအား သိမ်းပိုက်ရန် ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နှင့်ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ်အတွင်း စစ်ပွဲ တစ်ရပ်ပေါ် ပေါက်လာအောင် လှုံ့ဆော်သည့် လုပ်ရပ်ဖြစ် ကြောင်းမြောက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကစွပ်စွဲပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ ကျင့်ခန်းတွင် တောင်ကိုရီး ယားတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၆,ဝဝဝ နှင့် အမေရိ ကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ဝ,ဝဝဝ ခန့်ပါဝင် လေ့ကျင့်ကြ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကုလသ မဂ္ဂကွပ် ကဲမှုဌာန ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ၇ နိုင်ငံဖြစ်သော သြစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်၊ ဒိန်းမတ်၊ နော်ဝေနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံ တို့မှတပ်ဖွဲ့ ဝင်အချို့ သည်လည်း အဆိုပါ စစ်ရေး လေ့ကျင့် ခန်းသို့ လေ့လာ သူများအဖြစ် တက်ရောက် သွားကြ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
ပဋိပက္ခစုံစမ်းရေး မြန်မာအစိုးရလက်ခံရန် OIC တောင်းဆို
ရိုဟင်ဂျာအရေး သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်း ကြီးရုံး ရှေ့တွင် ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
၅၇ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းထားသော အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်း Organisation of Islamic Cooperation (OIC) က ရခိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်ရှာဖွေ စိစစ်ရန် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ် ရန် ရှိပြီး မြန်မာအစိုးရက လက်ခံခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံ ဂျဒ္ဒါမြို့တွင် တနဂ်နွေနေ့က ကျင်းပသော အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ထုတ်ပြန် ကြေညာရာ OIC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ အက်မီလဒ်ဒင် အီစနိုဂလူးက “ရိုဟင်ဂျာ လူနည်းစုများ၏ ဒုက္ခကို လုံခြုံရေးကောင်စီ အနေဖြင့် အာရုံစိုက်လာရေး တိုက်တွန်းရန် ကုလသမဂ္ဂရှိ မိမိတို့၏ ရုံးများကို ညွန်ကြားထားသည်” ဟု ဆိုသည်။
OIC ၏ ကြေညာချက်သည် ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တာနာ က ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်အပြီး ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ် ရခိုင်အရေးအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကို စုံစမ်းရန် ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် ကင်တားနားကို ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသများသို့ ပြီးခဲ့ ရက်ပိုင်း က သွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
တပ် ထိပ်တန်းအရာရှိများ ပါမည်ဖြစ်၍ KIO နှင့်အစိုးရ ဆွေးနွေးရန်နေရာ ညှိဆဲ
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် မြန်မာအစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များ ယခု တကြိမ်ပြန်လည် တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်မှ ထိပ်တန်း အရာရှိကြီး များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် နေရာ ညှိနှိုင်းနေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အကျိုးဆောင်များက ပြောသည်။ဇွန်လ ၂ဝ ရက်နေ့က KIO နှင့် အစိုးရ နှစ်ဘက် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နယ်စပ် မိုင်ဂျာယန်တွင် သုံးကြိမ်မြောက် အလွတ် သဘော တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက်တကြိမ် တွေ့ ဆုံ မှု တွင် နှစ်ဖက် စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ များနှင့် ပါဝင် ဆွေးနွေး ရန် သဘော တူခဲ့ သည်။ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော် သို့မဟုတ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် အစိုးရဘက်မှ အဆိုပြု ချက်များကို KIO ဘက်က သဘော မတူဘဲ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် ပြန်လည် အဆိုပြုထားသည်။
သို့သော် တပ်မတော် အရာရှိအများအပြားဖြင့် တဖက်နိုင်ငံတွင် သွားရောက် ဆွေးနွေးကြရန်မှာ အခက် အခဲရှိနေ၍ တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ်ကို ဆက်လက် ညှိနှိုင်းနေသည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေ က ပြောသည်။
“ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း အနေနဲ့တော့ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် တွေ့လို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြား တပ်မတော် တာဝန်ရှိတွေ ပါမယ်ဆိုတော့ ပြင်ဆင်ကြတဲ့ သဘောပါပဲ။ စစ်ဘက်က လူအများကြီးပါတဲ့ အဖွဲ့ဆိုတော့ သူများနိုင်ငံသွားလို့ သိပ်ပြီးတော့ မသင့်တော် အဆင်မပြေတော့ ညှိနေကြတယ်။ ခုတော့ အဲဒီလောက်မှာပဲ စောင့်နေရတယ်”ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နေရာညှိနှိုင်း ပြေလည်၍ ပြန်လည်တွေ့ဆုံဖြစ်ပါက KIO ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းတို့ တွေ့ ဆုံရန် ဖြစ်သည်။
သို့သော် KIO တပ်မဟာ ၃ နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန်နှင့် လွယ်ဂျယ်မြို့အကြား ပရန်ဝမ်ဒေသ သို့မဟုတ် ရွှေလီမြို့တွင်
တွေ့ဆုံ ရန် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့က စာရေးသားခဲ့မှုကို တလကျော်ကြာ အစိုးရဘက်ကမှ မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်မှု မရှိ သေးခြင်းကြောင်း KIO ဘက်မှ ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ပြောထားတဲ့နေရာကို သူတို့ လာနိုင်ရင်တော့ တွေ့မှာပဲ။ သူတို့ဘက်က ဒု-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် လာရင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီဆိုတဲ့ သဘောလား။ ဒု-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နိုင်ငံတော်အဆင့် အရာရှိဖြစ်လို့ နယ်စပ်ဒေသမှာ မသွားနိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ တခြားလူတွေ လာလို့ ရတာပဲ” ဟု KIO တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလနန် က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိ မှတ်တမ်း
ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လောက်ကိုင်ခရိုင် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်း အဖွဲ့သည် သတင်း အရ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ မန်တုံပါးကျေးရွာအနီးရှိ လီချောင်းချင်း၏ နေအိမ်သို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရှာဖွေရာ ၄င်းအပါ အဝင် တရားခံ(၈)ဦးနှင့်အတူ လက်နက်/ခဲယမ်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး/ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သက်သေခံပစ္စည်းတို့အား သိမ်း ဆည်း ရမိခဲ့သည်။
ကျောက်တော်မှာ ဘင်္ဂါလီများ ဆန်လု ၊ဆန်စက်မီးရှို
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း အခြေအနေများ ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီဟု အစိုးရက ပြောဆိုနေသော်လည်း ကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ တချို့ ၌ မီးရှို့ခံရခြင်း၊ ဆန်စက်ရှိ ဆန်၊ စပါးများ လုယက်ခံရခြင်း တို့ ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် တောင်ပေါက် ကျေးရွာရှိ ရခိုင်အမျိုးသား ဦးအောင်လှဇံ ၏ ဆန်စက်မှ ဆန်အိတ်များ၊ စပါးများ ကို အဓမ္မ ၀င်ရောက်လုယူခြင်း ခံရသည့်အပြင် ဆန်စက်လည်း မီးရှို့ခံရကြောင်း ဒေသခံများက ပြော သည်။
“ဦးအောင်လှဇံရဲ့ ဆန်စက် က ဆန်အိတ် ၄၀၀ ၀န်းကျင် အပြင် စပါးတင်း ထောင်နဲ့ချီ ပြီး လုယူကြတယ်၊ ပြီးရင် ဆန်စက် ကို မီးရှို့ကြတယ်၊ ဦးအောင်လှဇံတို့ ထွက်ပြေးလို့ လွတ်တယ်၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတဲ့သူတော့ မရှိဘူး”ဟု တောင်ပေါက် ရွာသားတဦး က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
ဦးအောင်လှဇံ၏ ဆန်စက်သို့ တောင်ပေါက်ရွာခံ ဘင်္ဂါလီ ၅၀ ကျော်က ညာသံပေး၍ အုပ်စုလိုက် ချီတက် လာကြပြီး ဆန်စက်ထဲသို့ ၀င်ရောက်၍ ပစ္စည်းများယူကြပြီး စက်ရုံဝင်းကို မီးရှို့ကြောင်း၊ စက်ရုံနှင့် အနီးရှိ အဆောင်တချို့ မီးလောင်ပြာ ကျသွားကြောင်း လည်း ၎င်းက ဆက် ပြောသည်။ တောင်ပေါက်ကျေးရွာ၌ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ အပြင် ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် တခြား တိုင်းရင်းသား တချို့ လည်း နေထိုင်ကြောင်း သိရ သည်။
ကျောက်တော် မြို့နယ်အတွင်းရှိ အပေါက်ဝ ကျေးရွာတွင်လည်း ယမန်နေ့က မီးရှို့မှု ဖြစ်ပွားရာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား များ၏ နေအိမ်များ အပြင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ၏ နေအိမ် တချို့လည်း မီးလောင်ကျွမ်းပြီး စုစုပေါင်း အိမ်ခြေ ၃၀ ဆုံးရှုံး သွား ကြောင်း လည်း သိရသည်။
ဘဏ်ခွဲအများဆုံး ဖွင့်ထားသော ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ပြည်တွင်း ငွေလွှဲခနှုန်းထား သုံးပုံတစ်ပုံလျှော့ချ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ဘဏ်ခွဲအများဆုံး ဖွင့်ထားသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ မြို့ ၁၁ မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများမှလွဲ၍ ကျန်ဘဏ်ခွဲများ၏ ငွေလွှဲနှုန်းထားများကို သုံးပုံတစ်ပုံ လျှော့ချ ပေးခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘောဇဘဏ် တာဝန်ရှိသူများထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။ “သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး လျှော့ချပေးခဲ့တာပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ အချင်းချင်း လွှဲပို့ရင် အရင် ကျပ်တစ်ရာကို ၁၅ ပြား ယူတာကနေ အခု ကျပ်တစ် ရာကို ၁၀ ပြားပဲ ကျသင့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားဘဏ်ကနေ လွှဲရင်တော့ အရင်နှုန်းထား အတိုင်းပါပဲ” ဟု ကမ္ဘော ဇဘဏ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆက်သွယ်သွားလာရ ခက်ခဲသော မြို့များမှာ အခြားမြို့များထက် ယခင်ကတည်းက ငွေလွှဲခနှုန်းထား မြင့်မားလျက်ရှိသည်။ ထိုမြို့များအနက် မူဆယ်၊ မြ၀တီ၊ တာချီ လိတ်၊ ကော့သောင်း၊ မြိတ်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ထားဝယ်၊ ကျိုင်းတုံမြို့များရှိ ဘဏ်ခွဲများမှ ငွေလွှဲခ နှုန်းထားများကို ယခင်က အတက် ပြား၂၀၊ အဆင်း ၁၅ ပြား ရယူရာမှ ယခုအတက် ၁၅ ပြား၊ အဆင်း ၁၀ ပြားသာ ရယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖားကန့်မြို့ဘဏ်ခွဲမှ ယခင် အတက်ပြား ၅၀၊ အဆင်းပြား ၂၀ ရယူရာမှ ယခု အတက်ပြား ၅၀၊ အဆင်း ၁၅ ပြား ငွေလွှဲခ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး မောင်တောမြို့ ဘဏ်ခွဲမှ ယခင် အတက်ပြား ၄၀၊ အဆင်းပြား ၂၀ ကောက်ခံရာမှ ယခု အတက်ပြား ၄၀၊ အဆင်း ၁၅ ပြား သတ်မှတ်ထားကာ ဗန်းမော်မြို့ ဘဏ်ခွဲမှ ယခင် အတက်ပြား ၄၀၊ အဆင်းပြား ၂၀ ကောက်ခံရာမှ ယခုသြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အတက်ပြား ၂၀၊ အဆင်း ၁၅ ပြားနှုန်းသာ ကောက်ခံတော့မည် ဖြစ် ကြောင်း ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်ခွဲအများဆုံး ဖွင့်လှစ် ထားသော ဘဏ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းတွင်း ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၇၀ ကျော်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းဘဏ်သည် ပြည်တွင်း လက်လီ၊ လက်ကား ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်ပငွေလွှဲ အ၀င် လုပ်ငန်း များကိုလည်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဘဏ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် အချို့တွင်ပါ L\_C ဖွင့်ခွင့်အား ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုပေးထားကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းရှင်အင်အား ၅၀၀ ကျော်တက်ရောက် မည့်ညီလာခံကျင်းပမည်
နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းရှင်အင်အား ၅၀၀ ကျော် တက်ရောက်မည့် ညီလာခံအားစက် တင်ဘာ တွင်ကျင်း ပရန်စီစဉ်နေကြောင်းဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှသိရှိရသည်။
အဆိုပါညီလာခံအတွက် နေ ပြည်တော်ရှိဟိုတယ်များအား အ ဆင့်မြှင့်တင်မှုများကြိုတင်ပြုလပ် ထားရန် ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ၀န် ကြီး ဦးဌေးအောင်နှင့်နေပြည်တော် ရှိ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင် ၃ ဦးတို့တွေ့ ဆုံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရ သည်။
ယခုလက်ရှိတွင် နေပြည်တော် သို့လာရောက်မှုတွင် Business Visa ဖြင့်သာ ၀င်ရောက်သူများပြား နေပြီး ဟိုတယ် များမှလည်း Business ခရီးသွားဧည့်သည်များအ တွက်လိုအပ်သည့် ၀န်ဆောင်မှုအ ခြေအနေများအားအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပြီး ၀န်ကြီး ဌာနနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဧည့်သည်ဝင်ရောက် မှုများပြားလာသဖြင့် ဟိုတယ်များ၏ လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆောင် ရွက်ထား သင့်ကြောင်း ၊CCTVကင်မရာများလည်းတပ်ဆင်ထားသင့်ကြောင်းဒုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့သည်။
“အခုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာ ကိုကြိုးမဲ့စနစ်နဲ့တပ်ဆင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်”” ဟု skypalace မှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦး ကဆိုသည်။ ယင်းကဆက်လက်၍ပြောကြားရာ တွင် “အခုတည်ဆောက်ဆဲဟို တယ်တွေပြီးစီးဖို့ ကိုယ့်ဟိုတယ်ရဲ့ တည်းခို နိုင်မယ့် ပမာ ဏရှိမှုဒါတွေ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်”” ဟု ပြော သည်။
ကေအိုင်အေမှ ဒရုခ တံတားအား မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲ
က ချင် ပြည် နယ် ၊ ဆွမ် ပ ရာဘွမ် မြို့နယ် မှာ ရှိတဲ့ မြစ်ကြီးနား-ဆွမ် ပရာ ဘွမ် သွား ကား လမ်း ကို ကေ အိုင်အေ အဖွဲ့မှ သြ ဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့က မိုင်း ထောင် ဖောက် ခွဲခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။အဆိုပါ မိုင်းထောင် ဖောက် ခွဲဖျက် ဆီး ခဲ့ တဲ့ အ တွက် တံ တား တစ် ခု လုံး ရေ ထဲ မျော ပါ သွားခဲရ ပြီး မည် သည့် ယာဉ်မှ သွား လာ လို့ မရရှိတော့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒရုခ တံတားသည် သံဘောင် ဘေလီ တံတား အမျိုး အစား ဖြစ်ပြီး အရှည်(၃၀၀) ပေ၊ အကျယ် (၁၈) ပေ ခန့်ရှိ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တံတား အား ကေအိုင်အေ မှ ဒုတ်ိယ အကြိမ် ထပ်မံ ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး ခဲ့ တြာ ဖစ် ပါတယ်။ ယခုလို ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီး မှုကြောင့် ဒေသခံ ကုန်သည် တွေ အ နေ နဲ့ ဒေ သ ထွက်ကုန်နဲ့ ကုန် စည် စီး ဆင်း မှု တွေ ရပ် တန့် ခဲ့ ရ တယ် လို့ ပြော ဆို နေ ကြပါတယ်။
သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု နိုင်ငံရေးပါတီများ ကျေနပ်မှူများရှိ
နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဤသို့တွေ့ရသည် (ဓာတ်ပုံ – နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်တွေ့ဆုံကာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကဏ္ဍများအပေါ် ဆွေးနွေးရခြင်းနှင့် ပတ် သက်၍ နိုင်ငံရေးပါတီ များက ကျေနပ် အားရကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က နေပြည်တော်၌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD)၊ ရခိုင် ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD)၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ၊ ကရင်ပြည်သူ့ တိုးတက်ရေးပါတီ၊ မြန်မာ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမို ကရက်တစ် ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီသစ် ပါတီ၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ ပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၊ မွန်ဒီ မိုကရေစီပါတီ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ၊ မြန်မာအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီစသည့် ၁၄ ပါတီမှ ပါတီခေါင်းဆောင်များတို့က တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
SNLD ပါတီက ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ကြီးငယ်မဟူ တပြေး ညီ ဆက်ဆံရန်၊ သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက် ကမ်းတွင် တရုတ် စကားပြောသည့် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ စိမ့်ဝင် နေမှုကို တားဆီးပေးရန်၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား လာမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူမည့် သန်းခေါင်စာရင်း၌ အခက်အခဲမရှိ ပါဝင်နိုင်စေရန်၊ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ပြဋ္ဌာန်းရန်တို့ကို တင်ပြခဲ့ကြောင်း ပါတီပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသည့် ဦးစိုင်းလိတ်ကဆိုသည်။
သုံးဘီးဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်သူကို ဘင်္ဂါလီများ ဓားဖြင့်လိုက်ခုတ်
ကျောက်တော် မြို့အနီးရှိ အပေါက်ဝကျေးရွာမှ ကျောက်တော်မြို့ သို့ သွားသည့် ခရီးသည်တင် သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို ယမန်နေ့ နေ့လယ် တစ်နာရီခန့်က ဘင်္ဂါလီများတားဆီးခဲ့ရာမှ တစ်ဆင့် ဓါးခုတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်သူသည် ဘင်္ဂါလီများ ဓားဖြင့်လိုက်ခုတ်သဖြင့် တင်ပါးတွင် ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို ထား၍ အသက်လု ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိသည်။
ကျောက်တော်မှာ မီးရှို့မှုတွေ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေကို အစိုးရက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ စီစဉ် လုပ် ဆောင်နေ တဲ့ကြားကပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း တင်းမာမှုတွေ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာက ဒီကနေ့မနက် အစောပိုင်းမှာ နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် အိမ်မီးရှို့မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ လူ့အခွင့် အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Tomas Ojea Quintana မြန်မာနိုင်ငံ က ပြန်သွားပြီး နောက် တနေ့မှာ အခုလို ဆူပူမှုတွေ ထပ်ဖြစ်တာပါ။ ဒီအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ၆ ရက်ကြာသွားရောက်ပြီး ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်းက အခြေအနေတွေကို လေ့လာခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Tomas Ojea Quintana က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို သီးခြား စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း စုံစမ်းဖို့ အဆိုပြုချက်ကို မြန်မာအစိုးရဘက်က ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဘန်ကောက်ရုံးကနေ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်းအတွင်း ဇွန်လတုန်းက လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာက နှစ်ဘက် သေ ဆုံးမှုတွေနဲ့ အပျက်အဆီးတွေ အတော်များခဲ့ပြီး အခြေအနေတွေ ဆိုးရွားလာတာကြောင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့တုန်းကပဲ ဒုသမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်းကိုယ်တိုင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားပြီး အခြေအနေတွေကို ၂ ရက်ကြာ လေ့လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်တော်မြို့မှာ နှစ်ဘက် တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပွားပြီး မနေ့ ကတော့ အိမ်တွေ အပြန်အလှန် မီးရှို့တဲ့အထိ အခြေအနေတွေ ပြန်လည် ဆိုးရွားလာခဲ့တာပါ။
ကျောက်တော်မြို့မှာ မနေ့ကနဲ့ ဒီကနေ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေတွေကိုတော့ ဒေသခံ တဦးက ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းထားရှိခွင့်ပြုရန် အစီအစဉ်မရှိဟုဆို
သြစတြေး လျနိုင်ငံ အနေဖြင့် အမေရိကန်နျူ ကလီးယားစွမ်းအင် သုံးလေ ယာဉ်တင် သင်္ဘောတစ်စီး နှင့်အခြားစစ် သင်္ဘောများ အတွက် နိုင်ငံအတွင်း အခြေ စိုက်စခန်း ထားရှိရန် အဆိုပြု မှုကို သြစတြေး လျကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး စတီဖင် စမစ်က ငြင်းပယ် ခဲ့ကြောင်း သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ AFP သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရ ပါသည်။အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွင် အမေရိ ကန်နိုင်ငံ၏ စစ်အင်အား တည်ဆောက် ရေးအတွက် သြစတြေး လျနိုင်ငံပါ့သ် မြို့အနီးရှိ သြစတြေး လျအနောက်ပိုင်း ရေတပ်အ ခြေစိုက် စခန်းတွင် အမေရိကန် လေယာဉ်တင် သင်္ဘော အုပ်တစ် အုပ်နှင့် အခြားသော ဂျက်တိုက် လေယာဉ်များကို အခြေစိုက် ထားရှိရန် ဦးစားပေး စဉ်းစား လျက်ရှိ ပါသည်။ဝါရှင်တန် အခြေစိုက် မဟာဗျူ ဟာနှင့်နိုင်ငံတ ကာလေ့လာ ရေးဌာန အနေဖြင့် ၄ှင်းအစီ ရင်ခံစာအား ကွန်ဂရက်သို့ တင်သွင်း ထားကြောင်း သြစတြေး လျနိုင်ငံက ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံအ နေဖြင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံအ နောက်ပိုင်း ရေတပ်အခြေ စိုက်စခန်းကို ကာလရှည် အသုံးပြု ခွင့်ရရှိခဲ့ သော်လည်း သြစတြေး လျနိုင်ငံ အနေဖြင့် အမေရိ ကန်နိုင်ငံ၏ လေယာဉ် တင်သင်္ဘော များအား အခြေစိုက်ထား ရှိခွင့်ပေး လိမ့်မည်မ ဟုတ်ကြောင်း စမစ်က သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဖော် ပြော ကြားခဲ့ သည်ဟု သိရှိ ရပါသည်။
ဗြိတိန် နိုင်ငံသည် အပျင်းရိဆုံး နိုင်ငံတွင် ပါဝင်ခြင်း
ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာလေ့လာ မှုအရ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၂ နိုင်ငံအား စစ်တမ်း ကောက်ယူ ခဲ့ရာတွင် ဗြိတိန်၊ ဆော်ဒီအာ ရေးဗီးယား၊ UAE နှင့် တောင်အာဖ ရိကနိုင် ငံသား များသည် ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အပျင်းရိ ဆုံးအဖြစ် တွေ့ရသည်။ Lancet Journal ၏လေ့လာ တွေ့ရှိချက် ဖော်ပြ မှုအရ ဗြိတိန် နိုင်ငံသည် အပျင်းရိ ဆုံးစာ ရင်းတွင် ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံ လူဦး ရေ၏ ၆၃.၃ ရာခိုင် နှုန်းမှာလှုပ်ရှား မှုမရှိသူများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဂရိနိုင် ငံသည် ပူနွေး သောမြေထဲ ပင်လယ် နိုင်ငံတစ်ခု ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်အစီ ရင်ခံစာ များအရ ကျန်းမာရေး နှင့်အညီ ညွတ်ဆုံး အစား အစာများ ကို စားသုံး သည့်နိုင်ငံ ဖြစ်၍ ပျင်းရိမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံဖြစ် ပါသည်။ လှုပ်ရှား မှုမရှိ သူမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေ၏ ၁၅ ရာ ခိုင်နှုန်း ခန့်သာ ရှိသည်။
အီဂျစ်အစိုးရ က တာဝန်ခံရမည်
ဗီယင်နာ သဘော တူညီမှုအရ လက်မှတ် ထိုးထားသော နိုင်ငံတိုင်းသည် ထိုတိုင်းပြည် အတွင်းရှိ သံရုံးအတွင်းသို့ ဝင်ေ ရာက် ခွင့် မရှိ။ ထို့ပြင် မည်သည့် အခြေအနေတွင် မဆို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရမည်။ (အပိုဒ် ၃၁)
Article 31. The host nation may not enter the consular premises, and must protect the premises from intrusionordamage.(ViennaConventiononConsularRelations)
"တိုင်းပြည် တစ်ပြည်သည် သူ့နိုင်ငံ အခြေစိုက် သံရုံးကို ကာကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ယနေ့တွင် အီဂျစ်ရှိမြန်မာသံရုံး အလံအား ဖြုတ်ချကာ မီးတင်ရှို့ခဲ့သည်။ထိုသို့သော အရေးအခင်းသည်လည်း အီရန်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အီရန်တွင် ဖြစ်သည်မှာ ဗြိတိသျှ သံရုံးအား ဝင်ရောက် စီးနင်းကာ ဗြိတိန် ဘုရင်မပုံကို မီးနှင့်ရှို့၍ ဗြိတိန် အလံအား ဆုတ်ဖြဲ မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကိစ္စအတွက် ဗြိတိန် အစိုးရက အီရန်မှ တာဝန်ရှိ သူများ အာားလုံးကို 48 နာရီအတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ထိုကဲ့သို့ ပြတ်သားသော အရေးယူမှုမျိုး မလုပ်နိုင်ပါက မြန်မာ့သိက္ခာသည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ထားဖွယ် မမြင်တော့ချေ။အီဂျစ်သံရုံး လိပ်စာမှာ အမှတ်(၈၁) ပြည်ထောင်စု ရိပ်သာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ဖုန်း-(00951)222886 - 222887 - Dir 222296 ဖြစ်သည်။ မြန်မာ အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ့်သံတမန် ထိုကဲ့သို့ အစော်ကား ခံရသည်ကို မည်ကဲ့သို့ တုန့်ပြန် မည်နည်းဟု စောင့်ကြည့် နေပါသည်။
The Voice ဂျာနယ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ရ
လာမည့် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် The Voice Weekly အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းစာစောင် ပြန်လည် ထုတ်ဝေသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း စာဖတ်ပရိသတ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား များအားလုံးကို လေးစားစွာ အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါ သည်။ စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာန၏ ထုတ်ဝေခွင့် ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခံထားရသည့် ကာလအတွင်း The Voice Weekly ကို အားပေးထောက်ခံ ခဲ့ကြသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ၊ ပုံနှိပ်သတင်းမီဒီယာ အသိုင်းဝိုင်းမှ လုပ်ဖော်ကိုင် ဘက်များ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး လှုမှုရေး နယ်ပယ် အသီးသီးမှ သတင်း ရင်းမြစ်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ အသီးသီးကို အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်းနှင့် အထူး အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါကြောင်း
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် မြန်မာအစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များ ယခု တကြိမ်ပြန်လည် တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်မှ ထိပ်တန်း အရာရှိကြီး များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် နေရာ ညှိနှိုင်းနေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အကျိုးဆောင်များက ပြောသည်။ဇွန်လ ၂ဝ ရက်နေ့က KIO နှင့် အစိုးရ နှစ်ဘက် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များ တရုတ်နယ်စပ် မိုင်ဂျာယန်တွင် သုံးကြိမ်မြောက် အလွတ် သဘော တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက် တကြိမ် တွေ့ ဆုံ မှု တွင် နှစ်ဖက် စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ များနှင့် ပါဝင် ဆွေးနွေး ရန် သဘော တူခဲ့သည်။ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော် သို့မဟုတ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်မြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် အစိုးရဘက်မှ အဆိုပြု ချက်များကို KIO ဘက်က သဘော မတူဘဲ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် ပြန်လည် အဆိုပြုထားသည်။
သို့သော် တပ်မတော် အရာရှိအများအပြားဖြင့် တဖက်နိုင်ငံတွင် သွားရောက် ဆွေးနွေးကြရန်မှာ အခက်အ ခဲရှိ နေ၍တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ်ကို ဆက်လက် ညှိနှိုင်းနေသည်ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေ က ပြောသည်။
ထိပ်တန်းမြန်မာသံတမန်တစ် ဦး၏ ၁၉၉၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမ ဆုံးတောင်ကိုရီးယားခရီးစဉ်အဖြစ် နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် သည် ဇူလိုင် ၄ ရက်မှ ၅ ရက်ထိ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ လေး ရက် ကြာသွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံခြားရေးပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးသည် သြဂုတ် ၃ ရက်တွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီး ကင်ဆောင် ဟွမ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေး နွေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးနှင့် မြန် မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေများ အပေါ် လေ့လာသုံးသပ်မှုများပြု လုပ်ခဲ့ပြီး ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အရင်းအမြစ်၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် နှစ်နိုင်ငံအချင်း ချင်းဖလှယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များစွာကို ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ စွမ်းအင်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် တရားရေးစသည့် ကဏ္ဍများ၌လည်း အစိုးရချင်းပူး ပေါင်းဆောင် ရွက်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နှင့် အရှေ့မြောက်အာရှကိုခြိမ်းခြောက် လာသည့် မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူ က လီးယားအရေးကိစ္စများလည်း မြန်မာအစိုးရက ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီး ယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတလီ မြောင်ဘတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာ ရောက်ပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံ ရေးကဏ္ဍ စုံပို မိုခိုင်မာလာတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ နောက်ထပ် တိုးတက်မှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ဖို့အ လားအလာ ကောင်းပါတယ်”ဟုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားသည်။
မြန်မာ-တောင်ကိုရီးယား နှစ် နိုင်ငံသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် သံတမန်ဆက်ဆံရေး တရားဝင်စတင်ထူ ထောင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအားဆန့်ကျင်သောဆန္ဒပြမှုတွင် ပါဝင်သူများအား ဗီယက်နမ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်း
အငြင်းပွား လျက်ရှိသော တောင်တရုတ် ပင်လယ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ ၏ပိုင်နက်နယ် မြေတောင်းဆို မှုအား ဆန့်ကျင်သည့် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှု တစ်ခု ဟနွိုင်းမြို့ ၌ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး ဆန္ဒပြသူ ၂ဝ ကျော်အား ဗီယက်နမ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ ရှိသူများမှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူ များအား အသင့်စောင့် နေသော ဘတ်စ်ကားများ ပေါ်သို့ အတင်းအကြပ် တက်ရောက် စေခဲ့ပြီး ၄င်းတို့အား လိင်လုပ် သားများနှင့် ဆေးစွဲသူ များအား ထိန်းသိမ်း ရာတွင်အ သုံးပြုသည့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး စခန်းများသို့ ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းခံ ရသူတစ်ဦးမှ AFP သတင်းဌာနသို့ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဆန္ဒပြသူ များသည် ဗီယက်နမ် အလံများ၊ စာတမ်း များဝှေ့ ရမ်းကာ တရုတ်နိုင်ငံ ၏ကျူးကျော် ရန်စမှုများ ကျဆုံးပါ စေဟု ကြွေးကြော် ခဲ့ကြပါသည်။
ဟနွိုင်းမြို့တွင် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ များကြောင့် တစ်လ ကျော်ကာ လအတွင်း ဆန္ဒပြမှု ၄ ကြိမ် ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သော ၃ လအတွင်း ဆန္ဒပြမှုတွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းမှု များမရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ တောင်တ ရုတ်ပင်လယ် အတွင်း အငြင်းပွား မှုများမြင့်မား လာချိန်၌ အဆိုပါကန့် ကွက်ဆန္ဒပြမှု များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတို့သည် Spratly နှင့် Paracellူကျွန်းတို့အား ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ကာလကြာ ရှည်စွာ အငြင်းပွား မှုများ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ Spratly ကျွန်းများအား ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာ အောက်တွင် ထားရှိသော ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ဗီယက်နမ် နိုင်ငံက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး နောက်တွင် တရုတ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အကြား ဆက်ဆံရေး သည်လည်း အနည်းငယ် တင်းမာခဲ့ ရပါသည်။ တောင်တရုတ် ပင်လယ် တစ်ခုလုံးကို မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တရုတ် နိုင်ငံက တစိုက်မတ် မတ်ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အလား တူပင် တောင်တရုတ် ပင်လယ် အား ထိုင်ဝမ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘရူနိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် တို့မှလည်း ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားလျက် ရှိပါသည်။
ဆီးရီးယားအစိုးရစစ်လေယာဉ်များက Aleppo မြို့ရှိ သူပုန်နေရာများအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း
သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဆီးရီးယား အစိုးရစစ် လေယာဉ်များက ဆီးရီး ယားနိုင်ငံ ဒုတိယ အကြီးဆုံး Aleppo မြို့ရှိ သူပုန်နေ ရာများကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ပြီးနောက် မြေပြင်ထိုး စစ်ဆင်နွှဲ ရန်အတွက် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ဝ,ဝဝဝ ဦးကျော်က Aleppo မြို့ ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် စုဖွဲ့၍ ဝိုင်းပတ်ပိတ် ဆို့ထားကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။ တစ်ချိန် တည်းတွင် ဒမတ်စ ကတ်မြို့ တော်ရှိ ဘတ်စ်ကား တစ်စီးပေါ် မှနေ၍ ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရသော အီရန် နိုင်ငံသား ၄၈ ဦး ပြန်လွှတ် ပေးရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ဆီးရီးယား အတိုက်အ ခံများနှင့် ဆက်သွယ် မှုရှိသည့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများထံ အီရန်နိုင်ငံ က အကူအညီ တောင်းခံ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့ဖမ်း ဆီးထားသည့် ဓားစာ ခံများမှာ အီရန်တော် လှန်ရေး အစောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ သူပုန်များက တုံ့ပြန်ပြော ကြားခဲ့ကြောင်း အာရပ် သတင်းရုပ်/သံလိုင်း တစ်ခုက ထုတ်လွှင့် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ၄ှင်း၏ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံများ ပစ်ခတ်နိုင်မှု အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရေး နီးစပ်လာပြီဟုဆို
တောင်ကို ရီးယားနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့သည် မြောက်ကို ရီးယားမှ ခြိမ်းခြောက် မှုများကို အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန် နိုင်ရန်အတွက် တောင်ကို ရီးယား နိုင်ငံ၏ ပဲ့ထိန်းဒုံး ပျံများရောက် ရှိပစ်ခတ် နိုင်မှုအကွာ အဝေးကို တိုးမြှင့်ရေး သဘောတူ ညီချက်ရ ရှိရန်နီးစပ် လာပြီဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ Newsnow သတင်း တစ်ရပ် အရသိရှိရ ပါသည်။ တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ကင်ကွမ်ဂျင်းက ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတွင် လက်ရှိရ ရှိထားသော ၃ဝဝ ကီလိုမီတာ(၁၆၈ မိုင်)အထိ သာရောက်ရှိ ပစ်ခတ်နိုင်သော ပဲ့ထိန်း ဒုံးပျံများ သာထုတ် လုပ်ရေး ကန့်သတ်ချက် ကိုပြင်ဆင်ပြီး လက်ရှိ ထက်ပိုမိုဝေးကွာသော အကွာ အဝေးအထိ ပစ်ခတ် ရောက်ရှိ စေနိုင်သောဒုံး ပျံများထုတ် လုပ်ရေးသ ဘောတူညီ မှုရရှိရန် ကြိုးပမ်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အမေရိ ကန်နိုင် ငံသည် တောင်ကိုရီး ယားနိုင်ငံတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၈,၅ဝဝ အခြေစိုက် ထားရှိပြီး တောင်ကို ရီးယားနိုင် ငံကို နျူကလီး ယားလက်နက် တစ်စုံတစ်ရာ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် လာမှုမှ အကာအကွယ် ပေးသွား မည်ဟု အာမခံထား သည့်အတွက် ကြောင့် တောင်ကိုရီး ယားနိုင်ငံက နိုင်ငံ၏ပဲ့ ထိန်းဒုံး ပျံများပစ် ခတ်နိုင် မှုအကွာ အဝေးကို ကန့်သတ်မှု အားလက် ခံထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြောက်ကို ရီးယား၏ ပဲ့ထိန်းဒုံး ပျံများသည် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှ ၄ဝဝ ကီလိုမီတာ(၂၄၈.၅ မိုင်)ကျော် ကွာဝေးသော တောင်ကို ရီးယား နိုင်ငံ၏ ဂျေ ဂျူးကျွန်း အထိရောက် ရှိပစ်ခတ်နိုင် စွမ်းရှိကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီး ယားနိုင်ငံတွင် အမျိုးမျိုး သောဒုံးပျံ အစင်းပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး ၄ှင်းတို့ အနက် အများစုမှာ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကိုချိန် ရွယ်ထား သည်ဟု တောင်ကို ရီးယား နိုင်ငံကယူဆ လျက်ရှိ ကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။
ရုရှားနှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့သည် INDRA-2012 အမည်ရှိ အကြမ်း ဖက်မှု နှိမ်နင်းရေး ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့် ခန်းအား ဆိုက် ဘေးရီး ယားဒေသရှိ ဘူယာ တီယာ မြို့တွင် သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့ ၌ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ကြောင်း Newsnow
သတင်း တစ်ရပ်အရ ပြုလုပ်နေပုံ သိရှိရ ပါသည်။ ဘာဒန်နီ လေ့ကျင့် ရေးနယ် မြေတွင် ပြုလုပ်မည့် အဆိုပါ စစ်ရေး လေ့ကျင့် ခန်းအား သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ အထိ ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရုရှား အရှေ့ပိုင်း စစ်ဒေသ ဆိုင်ရာပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိ သူကပြော ကြားခဲ့ ပါသည်။ တစ်နိုင် ငံလျှင် အင်အား၂၅ဝ ဖြင့် စုစုပေါင်း တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ဝဝ ဦးခန့်ပါ ဝင်ပြီး ရုရှား နိုင်ငံ လုပ်တိုက် ခိုက်ရေး ယာဉ်များဖြင့် လေ့ကျင့် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ တို့သည် INDRA စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်း များအား ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် ကတည်း ကစ တင်၍ (၅)ကြိမ် လေ့ကျင့် ပြီးဖြစ် ရာနောက် ဆုံးအကြိမ် လေ့ကျင့် ခြင်းအား ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလတွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၌ လေ့ကျင့်ခဲ့ ကြောင်းနှင့်၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ ဘက်မှ ပျက်ကွက် မှုကြောင့် လေ့ကျင့် ခြင်းမပြု လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း ပြည်ပစစ်အခြေစိုက် စခန်းများထားရှိမည်မဟုတ်ဟုဆို
ဥဇဘက် ကစ္စတန် နိုင်ငံသည် ၄င်း၏ပိုင် နက်နယ် မြေအတွင်း ပြည်ပစစ် အခြေစိုက် စခန်းများ ထားရှိ မှုကို တားမြစ်ပိတ် ပင်ရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ Newsnow သတင်း တစ်ရပ် အရသိရှိရ ပါသည်။ အဆိုပါ အခြေအ နေကြောင့် အမေရိကန် အနေဖြင့် အာဖဂန်တွင် စစ်ဆင် ရေးလုပ်ငန်း များဆောင် ရွက်ရန် အတွက် ဥဇဘက် ကစ္စတန် နိုင်ငံ၌ စစ်အခြေစိုက် စခန်း တစ်ခု ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်နိုင် ဖွယ်ရှိသည် ဆိုသော ထင်မြင်ချက် များထွက် ပေါ်နေမှုကို အဆုံးသတ် စေခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ တားမြစ် ပိတ်ပင်မှုသည် အမေရိကန်နှင့် ဥဇဘက် ကစ္စတန် စစ်ဘက်ပူး ပေါင်းဆောင် ရွက်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေမည်မ ဟုတ်ကြောင်း လေ့လာ ဆန်းစစ် သူအချို့ ကပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တားမြစ် ပိတ်ပင်မှုသည် သမ္မတ အစ္စလာမ် ကာရီမော့က အဆိုပြု ထားသော အရေးပါ သည့်နိုင်ငံခြား ရေးမူဝါဒ အနက် တစ်စိတ် တစ်ဒေသ ဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် မေလတွင် အန်ဒီ ဇန်မြို့တွင် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော ဆူပူအြုံ ကမှုအပေါ် အစိုးရက နှိမ်နင်း မှုကြောင့် ဥဇဘက် ကစ္စတန်၊ အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂတို့ အကြားဆက် ဆံရေး ပျက်ပြားခဲ့ရာ ဥဇဘက်က စ္စတန်နိုင် ငံသည် ကာရှိခန်နာ ဘတ်မြို့ရှိ အမေရိကန် လေတပ် အခြေစိုက် စခန်းကို ဖျက်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။ သမ္မတ ကာရီမော့ လက်ထက်တွင် အမေရိကန်နှင့် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာ ခြင်းကြောင့် ဥဇဘက် ကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် အမေရိကန် စစ်အခြေ စိုက်စခန်း ပြန်လည် ထားရှိလိမ့် မည်ဟူသော ပြည်တွင်း နှင့်ပြည်ပမှ ထင်ကြေး ပေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သော်လည်း အဆိုပါ တားမြစ် ပိတ်ပင် ချက်ကြောင့် ပြည်ပစစ် အခြေစိုက် စခန်းများ၊ သို့မဟုတ် စစ်ပစ္စည်း များကို နိုင်ငံပိုင် နက်နယ်မြေ အတွင်း ထားရှိ လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ပတ္တနီ ပြည်နယ်တွင် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က အကြမ်း ဖက်တိုက် ခိုက်မှု ၂ ရပ် ကြောင့်လူ ၃ ဦးသေ ဆုံး၍ ၁ဝ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရ ရှိခဲ့ကြောင်း Xinhua သတင်း တစ်ရပ် အရသိရှိ ရပါသည်။ ၄င်းအပြင် Runda Kumpulan Kecil အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့က ဟတ်ယိုင် ခရိုင်ကို ပစ်မှတ် ထားထပ်မံ တိုက်ခိုက် လာနိုင်ခြေ ရှိသည် ဟူသော ထောက်လှမ်း ရေးသတင်း များထွက်ပေါ် လာပြီးနောက် ထိုင်းအ စိုးရသည် နိုင်ငံတောင် ပိုင်းစွန်း ဒေသတွင် လုံခြုံရေး အစီအမံများ ကိုတိုး မြှင့်ခဲ့ပြီး စစ်နည်း ဗျူဟာ သစ်များ ချထားရေး စဉ်းစား လျက်ရှိကြောင်း ထိုင်းအ စိုးရ အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သိရှိ ရပါသည်။ ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး ဆူကန်ပို ဆူဝမ် နာသက်က နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း စွန်းဒေ သတွင် လက်နက် တပ်ဆင် ထားသော ဝေဟင် ကင်းထောက် လေယာဉ် များအပါ အဝင် စစ်ဗျူဟာ သစ်များနှင့် တိုးမြှင့် ထားသော လုံခြုံရေး အစီအ မံများချ ထားရေး အဆိုပြု ထားပါသည်။ ထိုင်းအစိုး ရအဖွဲ့သည် တောင်ပိုင်း စွန်းရှိစစ် မှုထမ်း များကို အုပ်ချုပ် ထောက်ပံ့မှုပေးရေးအတွက် အသုံးစရိတ်အဖြစ် ဘတ်ငွေ ၃၉၁ သန်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂.၄ သန်း)ပေးအပ်ရေး ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် နေ့တွင် အတည်ပြု ပေးခဲ့ ပါသည်။ တောင်ပိုင်း စွန်းဒေ သတွင် အကြမ်း ဖက်သမား ပေါင်း ၈ဝဝဝ မှ ၁ဝ,ဝဝဝ ထိရှိ ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ဂျပန်နိုင်ငံ၏ကာကွယ်ရေးစက္ကူဖြူစာတမ်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဝေဖန်မှုအားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်း
တရုတ် နိုင်ငံအ နေဖြင့် ဂျပန်နိုင် ငံကမ ကြာသေး မီကထုတ် ဝေခဲ့သော ကာကွယ် ရေးစက္ကူ ဖြူစာ တမ်းတွင် တရုတ် နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ကာကွယ် ရေးမူဝါဒ နှင့်ပတ်သက် သည့်ဖော် ပြမှုသည် အခြေအမြစ် မရှိသော ဖော်ပြမှုများ ဖြစ်သဖြင့် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြောင်း တရုတ် ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး ဌာနပြော ရေးဆို ခွင့်ရှိGeng Yansheng ကသြ ဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ တွင်ပြော ကြားခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရ ပါသည်။တရုတ် နိုင်ငံ၏ စစ်ရေး မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန်အာဏာ ပိုင်များအား အသိပေး ပြောကြား ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ် နိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်း စွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးနှင့် ခံစစ်ဦး စားပေး စစ်ရေး မူဝါဒ ကိုသာ လက်ကိုင် ထားလျက် ရှိကြောင်းGeng ကပြော ကြားခဲ့ ပါသည်။ တရုတ် နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ကာကွယ် ရေးအား မြှင့်တင် ခြင်းသည် တရုတ် နိုင်ငံ၏ အချုပ် အခြာအာ ဏာအား ထိန်းသိမ်း ရန်လိုအပ် မှုအရ လုပ်ဆောင် ခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သည့် နိုင်ငံ ကိုမှ ခြိမ်းခြောက်ရန် မရည် ရွယ်ကြောင်း၊ ဂျပန် နိုင်ငံသည် စစ်လက် နက်ပစ္စည်း ဆက်လက် ဝယ်ယူမှု၊ စစ်ရေး ဆိုင်ရာ မဟာ မိတ်ဖွဲ့မှုနှင့်ဒေ သတွင်း လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် မဟုတ် မမှန်ပြော ဆိုမှုတို့ကဲ့ သို့သော အကြောင်း ပြချက်များ လုပ်ဆောင် ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတ ကာကိုစိုး ရိမ်မှုဖြစ် စေခဲ့ကြောင်း၊ ဂျပန် အနေဖြင့် ၄င်း၏ ကာကွယ် ရေးမူဝါဒ အားဆန်း စစ်ပြီးဒေသ တွင်းတည်ငြိမ် အေးချမ်း ရေးအား ပိုမိုလုပ် ဆောင်သင့်ကြောင်း Geng ကပြော ကြားခဲ့ ပါသည်။ ဂျပန်နိုင် ငံ၏ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် နေ့က ထုတ်ပြန် ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည် ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာစက္ကူ ဖြူစာ တမ်းတွင် တရုတ် နိုင်ငံသည် အရှေ့ တရုတ် ပင်လယ်၊ တောင်တရုတ် ပင်လယ်နှင့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ တို့အပါအဝင် ဂျပန်နိုင်ငံ အနီးရေပိုင် နက်များတွင် စစ်ရေး လှုပ်ရှား မှုများနှင့် စစ်ဆင်မှု များတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင် လာဖွယ် ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ သည်ဟု သိရှိရ ပါသည်။
▼ Aug 07 (34)
အီရန်နိုင်ငံ ၏စစ်ရေးကြီး ထွားလာမှုကို ဗြိတိန်မှ စို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန် ယူမည့် တရားဥပေ...
မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါသော မြန်မာအပေါ် ရိုဟင်ဂျာကို ခု...
မာလီနိုင်ငံအတွင်း အာဖရိကတပ်ဖွဲ့များ ကြားဝင်ဆောင်ရွ...
ဆီးရီးယား နိုင်ငံ၌ ပြန်ပေးဆွဲခံ ထားရသည့် အီရန် ဘုရ...
ဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့များက မြို့တော် ဒမတ်စကတ်အား အပြည့်...
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက တောင်ကိုရီးယား-အမေရိကန် ပူ...
တပ် ထိပ်တန်းအရာရှိများ ပါမည်ဖြစ်၍ KIO နှင့်အစိုးရ ...
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိ ...
ဘဏ်ခွဲအများဆုံး ဖွင့်ထားသော ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ပြည်တွင်း ...
နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းရှင်အင်အား ၅၀၀ ...
သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု နိုင်ငံရေးပါတီများ ကျေ...
သုံးဘီးဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်သူကို ဘင်္ဂါလီများ ဓားဖြင်...
ဗြိတိန် နိုင်ငံသည် အပျင်းရိဆုံး နိုင်ငံတွင် ပါဝင်ြ...
ဆီးရီးယားအစိုးရစစ်လေယာဉ်များက Aleppo မြို့ရှိ သူပု...
ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း ...